Bilaogera Iraniana sy ny bilaogy iraisana: Avy amin’ny fampiharana demokratika hiarovana ny fahalalahana miteny · Global Voices teny Malagasy
Bilaogera Iraniana sy ny bilaogy iraisana: Avy amin'ny fampiharana demokratika hiarovana ny fahalalahana miteny
Voadika ny 17 Novambra 2018 6:28 GMT
Niaina zava-baovao ny bilaogera Iraniana tao anatin'ny enim-bolana farany dia ny Famahanana Bilaogy Iraisana. Nisy ny bilaogera maro avy any amin'ny toerana samihafa niaraka tamin'ny fomba fijery samihafa nivondrona ary nanomboka ny KHABARCHIN amin'ny teny Farsi. Sehatra ho an'ny bilaogera maro mba hiaraha-miasa miaraka voalohany ny Khabarchin izay nantsoin'ny mpamorona azy hoe sampam-baovao Weblog Shahr (ny shahr dia tanàna amin'ny fiteny Persiana). Ny hampahafantatra ny olona momba ny rohy mahasoa, ny bilaogy sy ny vaovao no tanjon'ity famahanana bilaogy iombonana ity, mba hampisehoana fa afaka mamorona sehatra iraisana ireo olona manana hevitra samihafa ary mba hanaporofoana fa afaka manao hetsika iraisana ny Iraniana. Vao enim-bolana monja no nisian'ny Khabarchin dia efa nanapa-kevitra ny hamarana izany sahady ny mpikambana. Tao amin'ny hafatra farany, nilaza ireo mpanorina ny Khabarchin fa traikefa demokratika mahomby izany ary nanapan-kevitra ny hampiato ny asany izy ireo kanefa dia mbola malaza foana ny bilaogy. Rehefa mijery ny arisivan'ny bilaogy dia mahita vaovao fohy momba ny karazana lohahevitra rehetra avy amin'ireo gadra politika sy ny sivana ka hatrany amin'ny hetsika ara-kolontsaina sy ny mozika. I Majid Zohari ny iray tamin'ireo mpikambana mavitrika tao amin'ny Khabarchin izay tena bilaogera mavitrika tany Kanada.
Ny famoronana ny PenLog no traikefa famahanana bilaogy iraisana iray hafa. Fikambanan'ny mpanoratra bilaogy Iraniana izay manana mpikambana/bilaogera miisa 200 eo ho eo ny Penlog. Ny hiaro ireo bilaogera Iraniana, hiady amin'ny sivana, hampiroborobo ny fahalalahana miteny ao amin'ny aterineto ary hanome fanohanana ara-teknika ho an'ireo mpikambana ao aminy no tanjon'izy ireo. Manomana fifanakalozan-dresaka ao amin'ny Paltalk momba ny lohahevitra samihafa toy ny sivana sy ny fomba hiainana izany ny Penlog. Azo vakiana ao amin'ny Penlog ny momba ireo bilaogera voasambotra, ny antsafa niarahana tamin'ny talen'ny Reporters without borders amin'ny teny Persiana, …. Amin'ny fiteny Persiana sy Anglisy ity bilaogy ity .
Zava-dehibe ho an'ny hetsika iraisana ny traikefa niainan'ny Khabarchin nandritra ny enim-bolana. Mety ho lasa sehatra virtoaly tsikelikely hiarovana ny bilaogera ny Penlog. Tamin'ny volana Martsa 2005, nanohitra ny fisamborana ilay bilaogera Omid Parvar ny Penlog. Mety ho lasa feon'ireo bilaogera tapenam-bava amin'ny hoavy ihany koa izy.